Warka - wiishka AD-cusub
Qaadista Safka Shaqada culus
Platform Duty culus Lfit
Gawaarida Dayactirka Gawaarida Gawaarida
Nidaamka Cabbiraadda Elektarooniga ah
Nidaamka Jiida Ilkaha + Mashiinka Alxanka
U hoggaansamida hal-abuurnimada, la jaanqaado Times, raacdada ruuxda kaamil ah ee shirkadda MAXIMA waxay sameysaa dadaal badan si loo daboolo baahida macaamiisha iyo had iyo jeer hal-abuurnimada, si joogto ah ka baxsan. MAXIMA waxay ka shaqeyneysay kor u qaadista Khadka Safka Wareegtada Culeyska Daran ee culus marka la eego muuqaalka iyo shaqada ilaa iyo 2011. Ugu dambeyntiina, MAXIMA waxay sameysay horumar ka dib markii si taxaddar leh loo naqshadeeyay iyo kormeer.
Muuqaal ahaan, waxaa jira muuqaal cusub oo leh midabyo cadcad iyo buluug fudud. Fadlan eeg sawirka hoose. Wiishka muuqaalka cusub, waxaa kujira hal 9 'shaashad taabasho midab ballaaran ah, oo muujineysa koodhka qaladka ee u dhigma iyo talaabooyinka faahfaahsan ee hagaya dadka isticmaala si ay u hagaajiyaan qaladaadka, taas oo sahlaysa hawlgal habboon. Midabada cusubi waa kuwo soo jiidasho iyo yaab badan.
Xilliga shaqada, MAXIMA waxay soo saartay howlaha cusub ee isku xirka bilaashka ah. Isku xirnaansho bilaash ah micnaheedu waa dhammaan tiirarku waa isku mid; tiirarka isku awoodda ahi waxay si xornimo ah ugu gorgortami karaan waqti go'an. Tusaale ahaan, waxaa jira 16 wiish wiish ah oo leh xiriir isku xiran oo bilaash ah, waxaad dooran kartaa googo kasta oo iyaga ka mid ah si aad u wada dhigto hal koox, sida 2-, 4-, 6-, 8-, ama ilaa 16- tiirar, qaab fudud -ups, oo ku saleysan qaabka aasaasiga ah ee wireless. Shaqadani waxay ka tagaysaa fikradda tiirka weyn iyo tiirarka addoonta. Dhammaan wiishyadu waxay noqon karaan tiirka ugu muhiimsan isla markaana sidoo kale kooxayn karaan lambarro taxaddar la’aan ah oo tiirar ku hoos jira awood isku mid ah oo ay u dejiyeen dejinno fudud.
MAXIMA waxay sii wadi doontaa dhamaanteed inay lasocoto suuqa iyo hogaaminta iyo isbedelka, iyadoo ka shaqeyn doonta casriyeynta iyo kaamil ahaanta moodooyinka cusub ee culus ee safka culus. Mustaqbalka dhow, MAXIMA waxay sameyn doontaa waxqabad badan waxayna horumarin doontaa howlo badan si loo fududeeyo isticmaalka iyo dayactirka maalinlaha ah. Fadlan hayso rajada iyo mahadsanid dareenkaaga.
Waqtiga boostada: Dec-17-2020
2018 bandhig Jarmal
Wiish culus oo culus